Blackberry jamu - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Kugara uchifadza kupa anofamba uye kuzvivaraidza nekutora michero inonaka, kunyanya kana iri mwaka weblackberry.
Mumhuri mangu yatova tsika kuenda kunotsvaga izvi michero. Chinhu chinonakidza ndechekuti hatifanirwe kuenda kure zvakanyanya nekuti kune akawanda marambure munharaunda matinogara.
Gore rino ndanga ndatova kukurudzira vanasikana vangu kwemazuva mashoma kuti vandibatsire nawo kukohwa. Kunyangwe isu zvakare tiine rubatsiro rwevana vevavakidzani vangu avo pavakationa vakatanga kubatana kuti: Uye nzira ipi yauri kuzoita navo ...? Unogona kufungidzira kuti ndakavapindura !! 😉
Ini ndinowanzo gadzira iyi jam ine yakawanda huwandu hweshuga. Iwe unotoziva kuti ini ndinoda kuidzikisa pese pandinogona kuitira kuti dzirege kutapira asi, mune ino kesi, kana ikadzikiswa zvakanyanya inogona kuva inovava uye isingakwanise kuchengetedza kwakaringana.
Ini ndinowedzerawo mvura kuitira kuti irege kunyanyokora, nekuti ini handifarire iyo compact diki kwazvo.
Paunenge uchizvigadzirira, kana uchida iwe unokwanisa bvisa mbeu. Zviri nyore kwazvo, iwe unongofanirwa kupwanya mabheribheri nemvura uye wozoapfuudza nepakati peChinese kana yakanaka mesh strainer. Saka une pulp yakagadzirira kugadzira jam.
Kana iwe uchida kuti majamu ako apedze mwedzi yakati wandei, chinhu chakanakisa ndechekuti vachengetedze mumhepo takaita sei neizvi peach jam taive takapfuma sei.
Mabiko emangwanani ako haazombove akafanana zvakare neiyi jam inogadzirwa.
Recipe mhando: jamu
Kubika nguva: 26M
Nguva yakazara: 26M
500 g yemabhiribheri (akagezwa uye asina madzinde)
muto we 1/2 ndimu
125 g yemvura
Isu tinosuka mablackberry zvakanaka ndokuaisa mugirazi pamwechete nemvura uye muto wemonimu. Tinopwanya panguva Masekonzi mashanu pakumhanya 6.
Ipapo tinowedzera shuga uye chirongwa 25 maminetsi, varoma tembiricha, kumhanya 2 uye 1/2.
Kana kumagumo zvinoita sekunge pane chinhu chemvura chakasara, tinogona kuisa mamwe maminetsi mashanu, patembiricha imwechete nekumhanyisa, tisina beaker uye nekuisa tswanda pamusoro kudzivirira kuputika.
Ipapo isu tinoisa iyo jamu mumidziyo yegirazi, tivhare nechivharo uye toisiya iwo akatsikitsira kwemaawa makumi maviri nemana.
Mushure menguva yekuzorora, zvirongo zvichave zvakagadzirira kuchengeta mufiriji.
Mamwe mashoko - Peach jam
Chinja iyi yekubheka kune yako Thermomix modhi
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Nyore, Lactose isingashiviriri, Zai risingashiviriri, Asingasviki 1/2 awa, Jams uye inochengetedza, Mapepa evana
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Special Recipes » Celiac » Blackberry jam
Silvia, wakanaka sei iwe. Ichokwadi ndechekuti muchero une ruvara rwekuti zvese zvaunoita zvinotaridzika zvakanaka.
Jamu iri nderekuti rine ruvara runokwezva kutarisisa uye rwunonaka. Shinga kuzviedza.
Ndakazviita masvondo matatu apfuura, zvinonyadzisa sei kuti ndakanga ndisina recipe yako! Nekuti, sekutaura kwako, ini handina kuwedzera mvura uye yaive gobvu, kunyange ichinaka. Ini ndichaedza recipe yako uye ndione mafambiro azvinoita. Ichokwadi chinotaridzika zvakanaka.
Begoña, nemvura yacho yakapfava mukugadzirwa uye yakapfuma kwazvo.
Uye zvakadini nembeu yemabrackberries? Ini handina kukwanisa kuvabvisa kunyangwe nemapasuru. mbeu dzambotaurwa dzakaomarara kupfuura sitirobheri semuenzaniso uye hadzifadze kutsenga. pakupedzisira ndaifanira kuimesa neyakajairwa strainer uyezve hongu ... asi shoma basa reChinese.
Pane chero munhu ane hunyengeri kana mushonga? kwaziso.
Ichokwadi ndechekuti uri kutaura chokwadi, mbeu ibhuku asi ini ndave kuda kujaira. Kunyangwe zvakadaro, ini ndichatevera kuraira kwako kubva kune ansefa, kuti kana uchifanira kuve nemoyo murefu, zvinopera.
Ini zvakare ndinowedzera akati wandei epippin maapuro, akati wandei matatu kana mana makirosi eblackberries, ehe, ini handiwedzere mvura.
Kubvisa mbeu ini ndinoshandisa muchina wemaoko wavanotengesa muzvitoro zvemadomasi. Inodhura inoita 20E. Ini ndinowanzoishandisa mushure mekuita jamu (bvisa mhodzi) .Rinouya gore ndichazviita ndisati ndaisa marinade mablackberry. neshuga, yatove izvo zvikasadaro iwe haungobvise zviyo chete asiwo chikamu chemushonga unowanikwa
Tichaona kuti zvinoratidzika sei
Kwaziso, ndinovimba inokubatsira
Pindura kuna ana
Kutenda nekugovana hunyengeri hwako nesu !!
kusisina chinhu akadaro
Ini ndinopedzawo rose zhizha ndichiita jamu yekusarasa michero pamiti yangu, uye nekutenda kune yangu thermomix ini handikure zvakanyanya uye ndinopedzisa mune jiffy. Ini ndinowanzoisa kashoma kana kwandairerekera kana ndimu yakasviba gelatin kuitira kuti irege kuva yakanyorova, asi haina gobvu kana, iri pakukwana kwayo.Iwe unowedzerawo gelatin yako here? kwaziso nekutenda zvakare.
Ini ndaiwanzowedzera gelatin kune sitirobheri imwe, yaive inomhanya chaizvo, asi ini ndatova nepfungwa yacho uye ini ndaisafanira kuwedzera chero chinhu kwairi.
Julia Quills akadaro
Kana ini ndichida kuti ikure, ini ndinowedzera maaspuni akati wandei eupfu agar-agar uye inogara nenzira yandinoifarira.
Pindura Julia Quilis
Ndakazviita svondo rapfuura, asi pachinzvimbo chekudira mvura mukati mayo, ini ndakawedzera yakadzvanywa muto wemandoni nehunyanzvi hwakakura.
Zvakanaka Alicia, ini ndinonyora pasi iyo sarudzo zvakare. Kutenda uye zvakanaka zvese
Mwanasikana wangu haadi mumwe, anoda iyo yeblackberry. Uye zvaunotaura, zvinonakidza sei kupedza masikati uchivaunganidza. Tsika zhizha rose.
Hongu Ruzi, vadiki vangu vanofarira kuvanhonga, kunyangwe dzimwe nguva vanofara uye vanokanganwa kuti mamakwenzi ane ma spike ... murombo!
Mhoroi, iyo jam yakanaka kwazvo, ndakavagadzira muzhizha rino kubva pavise nemaonde ivo vakandipa zvipo zvakawanda uye ini ndakaomesesa mashoma kuita jam zvakare. Ndatenda nemareseji ako
Zvinonaka sei, ako marmalade Mari Carmen. Ngatione kana ndikashinga ndogadzira vise ini.
Inotaridzika kunge inonaka! Iye zvino zvatiri mumwaka tinofanirwa kutora mukana wekutora mahabhurosi uye tasvika pairi!
Asi mumwe mubvunzo: Wakamboedza here kugadzira bheri jamu nemapakeji echando?
Roci, chokwadi ndechekuti ini handina kuyedza uye ndinofunga inofanirwa kubuda zvakanaka chaizvo. Kana iwe ukaedza, tiudze kuti sei.
Mhoro!! Ini ndiri mukuru fani weblog rako !! mazuva ese ndinouya kuzomushanyira uye ndinomutarisa uye kumutarisa !!! Ndinoda kubika uye ndinoda thermomix uye nemaresipi ako, zvidimbu etc. vanondibatsira zvakanyanya !!! Ini ndoda yako blog !! uye ndazviudza kuti inguva yekuti iwe uvatumire kukwazisa uye kuvakorokotedza nekuda kweiri blog rakanaka !! saka kwaziso kubva kunaBanyoles !! Kusveta !!
Ndatenda kwazvo Laura nemashoko ako, nekutitevera uye nerutsigiro rwako. Ndiri kufara kuti unoda blog.
Mhoro bheribheri iyi yamwari ndakaigadzira ndikashaiwa shuga kana mablackberries angave asidhi ndinoona kuti inogona kugadzirwa nemavise ndichaedza kuva nayo kuti ibude kwandiri
Pindura kune sita
Mhoro SIlvia, ndapota, ini ndangoita kudzikiswa kwaPedro XImenex, zvakanaka asi zvinobuda zvakanyanya, pane mhinduro yekuzvigadzirisa
Chary, kana zvikaitika zvakare, wedzera mvura shoma uye waini muzvikamu zvakaenzana.
Tenga isina-gluten - Juan akadaro
Iyo yakanaka nzira, uye inokodzera celiacs !!! chikuru, ndinokutendai zvikuru, tichazviedza pasina kupokana, saka zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya kana zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekudya zvekushambadzira zvemumuzinda) ..
Pindura Kuti Utenge isina-gluten - Juan
Juan, ndinogara ndichiedza kugadzirira mabikirwo akakodzera kusashivirira kune zvimwe zvekudya kana kupa pfungwa dzekuti nei chimwe chigadzirwa chingatsiviwa. Zvichida, imhaka yekuti ini ndinenge ndichitoziva neecliacs, sezvo ini ndine vazukuru vaviri vane kusagadzikana kweguteni. Ndiri kufara kuti unoda blog.
Yakakura blog uye makorokoto pane yako yekutanga nzvimbo mune iyo Bitácoras mibairo. Isu tinoteedzera yako blog padhuze, tinokushuvira rombo rakanaka. Shuwiro yakanakisa.
Ndatenda zvikuru nekutitevera.
Emma abella akadaro
Ndiri kuzoedza. Dzimwe nguva ini handisi ceo chikamu chekutaura saka ndinochiisa pano: Ndinoda mabikirwo ako !!! Uye kupi kwandisina kuwana "propaganda", ndinotumira meseji?
Pindura kuna Emma Abella
Mangwanani akanaka kubva kuTenerife, pane chero munhu anoziva iyo nzira yeiyo jamu jamu?
Ndatenda zvikuru nekuda kwepeji uye nekutitumira mabikirwo kanenge zuva nezuva.
Beti, chokwadi ndechekuti handina kuyedza asi pamwe zvinondikurudzira. Edza kuve nechokwadi kuti zvichakufambira zvakanaka.
Mhoroi, ndinoda kuziva kuti ndinoita sei kuti jam rirege kuvava, zvinogona here kuti ndiri kudarika nguva yekubika? Ndiri kuisa juzi remonimu rakawandisa mairi here? Ndibatsirewo ndapota, Nokukurumidza!
Kwaziso kubva kuColombia.
Pindura kuna Lizeth
Wedzera chete teaspoon yemononi uye ona zvinoitika.
Ndanga ndakora, kunaka kwakanaka asi hazvigoneke kuzviparadzira, chii chandingaite? dira mvura pane tembiricha ipi uye nekumhanyisa, kuitira kuti isangane, ndinotya kuti kuomarara zvakanyanya hakuzosanganiswa. Ndatenda
Pindura kuna maria jose
Mhoro Maria Jose:
Kana iwe uchida yangu yekuzvininipisa maonero, siya zvakadaro sezvazviri. Isa iri mumudziyo wakapfava uye ushandise sekunge une quince.
Nguva dzandakaedza kugadzirisa jamu gobvu ndakangokwanisa kuishatisa, saka ikozvino kana zvikaitika kwandiri ndinoti iblackberry inotapira ... neiyo chizi nyowani ndeye yummy !!
Mhoro girlssss, kana pachinzvimbo cheshuga tichiwedzera stevia kumajamu, zvinenge zvakafanana… ..
Kutenda nezano rekuti Ramoni!
Chokoreti chip muffin
Creamy Chokoreti Banana Express Dessert